IOS 11 kunye neewatchOS 4 zifika ngokusesikweni kwiimveliso zeApple | Iindaba zeGajethi
I-Apple iboniswe ngoJulayi ophelileyo ukuba yeyiphi indlela yokusebenza yeselfowuni yonyaka, nantsi indlela eya kuqala ngayo kuthotho lwee-Betas zokuba oogxa bethu abavela kwi-Actualidad iPhone kunye neSoy de Mac bebesoloko beyisebenzisa. Nangona kunjalo, Umzuzu wenyaniso ufikile, ingxelo esemthethweni ye-iOS 11 ikwiseva kwaye unokuzikhuphela ngoku.
Kodwa i-iOS 11 ayizelanga yodwa, iya kuba nenkampani yewatchOS 4Inkqubo yokusebenza eqhuba iwotshi ebukhali yenkampani iCupertino, nokuba ngaphandle kokuzisa izinto ezininzi ezintsha kumbono, ithembisa ukuphuculwa kokusebenza okungayenzakalisiyo iApple Watch.
Njengesiqhelo, ukuhlaziya i-iPhone yakho ungaya kuyo Useto> Ngokubanzi> Uhlaziyo lweSoftware kwaye uya kutsiba isaziso se-iOS 11. Ezona zinto zintsha zintsha kwinkqubo yokusebenza ziyahlaziywa kwaye zinokutshintshwa Iziko lolawulo okokuqala kwimbali ka-Apple, ukongeza kwi Iziko lezaziso. Kananjalo uninzi lwenqanaba losetyenziso olongezelelekileyo njengamanqaku enza ingqiqo enkulu. Amanye amacandelo anjengeVenkile yeApple Baye bahlaziywa ngokupheleleyo kuyilo kunye nokusebenza, bethembisa into eluncedo engazange ibonwe ngaphambili. Siza kufumana okungakumbi kwi-iOS 11, apho kwakhona sigcina inkqubo entsha "Iirekhodi" oko kuyasivumela ukuba silawule ukugcinwa kwe-iPhone kunye ne-iPad, kunye nawo onke amafu esiwavumelanisileyo.
I-iPad lelona xhamla likhulu kwidock entsha kunye nenkqubo yemultitasking ehlaziyiweyo esebenza ngezimbo zomzimba kwaye ikwenze uvelise ngakumbi ngokungathandabuzekiyo, ngaphandle kwamathandabuzo ophumeleleyo kwiimpawu ze-iOS 11.
Ngakolunye uhlangothi, i-Apple Watch iya kuba neendawo zokubukela ezintsha kwihlabathi likaPstrong-DisneyNgokukodwa, ibali leToyi lijoyina isakhelo sabalinganiswa ebesinabo ukuza kuthi ga ngoku (UMickey noMinnie). Ngawo onke amanye amanqaku siza kuhlala kuhlaziyo lweelogo ezithile ezibalulekileyo kunye nokuphuculwa kwenkqubo yefayile kunye nokulungiswa kwengcaciso eya kuphucula ibhetri kunye nokusebenza. Ukuba ufuna ukwazi okungakumbi, ungalibali ukutyelela i-www.actualidadiphone.com.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » IOS 11 kunye neewatchOS 4 zifika ngokusesikweni kwiimveliso zeApple